I-Apache Cassandra 4.0 ifika nokuthuthukiswa kwejubane, izici ezintsha nokuningi | Kusuka kuLinux
Zimbalwa izinsuku ezedlule I-Apache Software Foundation imemezele ukukhishwa kwenguqulo entsha ye-Apache Cassandra 4.0 okuyi uhlelo olusatshalaliswa lokuphathwa kwemininingo egciniwe Kungokwesigaba sezinhlelo ze-SQL futhi kuklanyelwe ukudala izitoreji ezinokwethenjelwa nezinokwethenjelwa zamanani amakhulu wedatha agcinwe ngendlela yokuhlangana okuhlangene.
Le nguqulo entsha ye-Apache Cassandra 4.0 ithathwa njengenguqulo ezinzile ngakho-ke ingasetshenziselwa ukusetshenziswa kokukhiqiza futhi isivele ihlolwe kwizingqalasizinda ze-Amazon, Apple, DataStax, Instaclustr, iland neNetflix ezinamaqoqo angaphezu kwama-1000 node.
Izici ezintsha eziyinhloko ze-Apache Cassandra 4.0
Le nguqulo entsha ye I-Apache Cassandra 4.0 imele cishe ukulungiswa kweziphazamisi okungu-1,000 XNUMX, ukuthuthuka, nezici ezintsha okulandelayo okulandelayo:
Isivinini esikhuphukayo nokukhula: idlulisa idatha ifike ku-5x ngokushesha ngesikhathi sokusebenza kwesikali futhi ifike ku-25% ukusebenza ngokushesha ekufundeni nasekubhaleni, inikeze ukwakhiwa okunwebeka okwengeziwe, ikakhulukazi ekusetshenzisweni kwamafu naseKubernetes.
Ukungaguquguquki okuthuthukisiwe: igcina izimpendulo zedatha ekuvumelaniseni ukwengeza ukukhanda okwengeziwe kokusebenza okusheshayo nokusebenza kahle nokuvumelana phakathi kokuphindaphindeka kwedatha.
Ukuphepha okuthuthukisiwe nokubonakala: umzila wokucwaningwa kwamabhuku ulandela ukufinyelela komsebenzisi nomsebenzi onomthelela omncane ekusebenzeni komthwalo womsebenzi. Ukuthwebula nokudlala okusha kunika amandla ukuhlaziywa kwemithwalo yemisebenzi yokukhiqiza ukusiza ukuqinisekisa ukuphepha nokuhambisana nokulawulwa kwe-SOX, i-PCI, i-GDPR noma ezinye izidingo.
Amasethingi wokucushwa okusha: amamethrikhi wesistimu aveziwe nezilungiselelo zokumisa zinikeza ukuguquguquka ko-opharetha ukuqinisekisa ukuthi banokufinyelela okulula kwedatha ekhulisa ukusetshenziswa.
Ukubambezeleka okuncishisiwe: izikhathi zokuqoqwa kukadoti ziyancishiswa zaya kuma-millisecond ambalwa ngaphandle kokucekelwa phansi kwe-latency njengoba usayizi wenqwaba ukhuphuka.
Ukucindezela okungcono: Ukusebenza kokucindezelwa okuthuthukisiwe kunciphisa ukucindezeleka okungadingekile esikhaleni sediski futhi kuthuthukise ukusebenza kokufunda.
Ngaphezu kwalokhu, kuphinde kuqokonyiswe lokho ukusekelwa kwelogi lokuhlola ukulandelela imisebenzi yokufakazela ubuqiniso wabasebenzisi nayo yonke imibuzo ye-CQL eyenziwe, kanye ne- ikhono lokugcina irekhodi eliphelele kanambambili lezicelo, ukuvumela ukuthi ugcine zonke izicelo zethrafikhi.
Ngokufanayo, futhi Inketho yokuhlola yokuqhathanisa zonke izihlahla zeMerkle iyagqanyiswa. Isibonelo, ukunika amandla inketho kuqoqo elinama-node ama-3, lapho ama-replicas amabili ayalingana futhi elilodwa liphelelwe yisikhathi, kuzoholela ekuvuseleleni umfanekiso ophelelwe yisikhathi kusetshenziswa kuphela ikhophi lomsebenzi we-replica yamanje.
Kanjalo, kungezwe ukusekelwa kwamatafula abonakalayo angakhombisi idatha egcinwe kuma-SSTables, kepha imininingwane ekhonjiswe nge-API (amamethrikhi wokusebenza, imininingwane yokumisa, okuqukethwe kwe-cache, imininingwane mayelana namakhasimende axhunyiwe, njll.).
Ukusebenza okucindezelwe kwesitoreji kuthuthukisiwe ukunciphisa ukusetshenziswa kwesikhala sediski nokwenza ngcono ukusebenza kokufunda.
Ngakolunye uhlangothi, kuvela ukuthi ingeze ukusekelwa kokuhlola kokuphindaphindeka kwesikhashana namaKhoramu Aphansi. Izimpendulo zesikhashana azigcini yonke idatha futhi zisebenzisa ukubuyiswa okwengeziwe ukuze kuhambisane nezimpendulo ezigcwele. Ama-Quorum asindayo ukubhala okulungiselelwe okungabhaleli ukuphindaphindwa kwesikhashana kuze kutholakale isethi eyanele yezimpendulo ezigcwele.
Ngokuqondene nedatha ephathelene nendawo yokhiye wohlelo (system. *), Lokhu manje kusenkomba yokuqala ngokuzenzakalela esikhundleni sokusatshalaliswa phakathi kwazo zonke izinkomba zedatha, okuvumela indawo engezansi ukuthi iqhubeke nokusebenza uma kwehluleka enye yamadiski angeziwe.
De ezinye izinguquko okugqamile:
Kungezwe ukusekelwa kokuhlola kweJava 11.
Kungezwe ukusekelwa kwemisebenzi yezibalo emibuzweni ye-CQL.
Umyalo we- "nodetool cfstats" ungeze ukusekelwa kokuhlungwa ngamamethrikhi athile nokukhawulela inani lemigqa ekhonjisiwe.
Izilungiselelo zinikezwa ukukhawulela ukuxhumana komsebenzisi kuzikhungo ezithile zedatha kuphela.
Kungezwe amandla okukhawulela amandla (imvamisa ikepisi) yokusebenza ukudala nokususa izifinyezo.
Ukuxhaswa kwePython 3 kwenziwa nge-cqlsh ne-cqlshlib (ukwesekwa kwePython 2.7 kusalondoloziwe).
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho yale nguqulo entsha, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Apache Cassandra 4.0 ifika nokuthuthukiswa kwejubane, izici ezintsha nokuningi
IGerbera 1.9 ifika nokwenza ngcono okwenziwe ngokwezifiso, ukwesekwa okwengeziwe nokuningi